Cameron.....: My Baking Class.....
My Baking Class.....
ကျွန်မ Chef ၀တ်စုံလေးဝတ်ပြီး မုန့်ဖုတ်ရတာ သိပ်သဘောကျတာပဲ...။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို Chef တစ်ယောက်ဖြစ်သွားသလိုခံစားရတယ်...။ ပထမဆုံးရက် ဆရာက Shangri La မှာ သူလုပ်ခဲ့ဖူးတဲ့ အတွေ့အကြုံတွေ ပြောပြတယ်။ American ကမ်းရိုးတန်းတစ်လျှောက် Cruise ပေါ်မှာ Pastry Chef လုပ်ခဲ့ရတဲ့ အတွေ့အကြုံတွေ... နောက် မုန့်ဖုတ်တဲ့အခါမှာ လိုအပ်တဲ့ ပါဝင်ပစ္စည်းနဲ့ အသုံးအဆောင်ပစ္စည်း ကိရိယာ တန်ဆာပလာတွေ စက်တွေအကြောင်း အခြေခံပြောပြပါတယ်..။ အပေါ်ပုံ ပထမဦးဆုံးလုပ်ထားတဲ့ soft roll လေးတွေ။ မြန်မာလိုအလွယ် နို့ပေါင်မုန့်ပေါ့..။ သူက နူးညံ့တဲ့အသားရှိတယ်..။ ဘိုတွေကတော့ ထောပတ်သုတ်စားကြတယ်...။
မုန့်လိုင်းမှာ Bakery နဲ့ Pastry နှစ်မျိုးရှိရာမှာ ကျွန်မဘယ်အပိုင်းကို ပိုအားသာလည်းဆိုတာကိုတော့ ခုချိန်ထိ စမ်းစစ်နေတုန်းပဲ သေချာတာကတော့ ကိတ် decorate လိုင်းကိုတော့ အားနည်းမှာ...။ ကျွန်မက မုန့်တစ်ခုကို အလှထက် အရသာကိုဦးစားပေးပြီးစားတတ်တယ်။ ကိတ်က Pastry လိုင်းကဆိုတော့... Bakery ကိုအားသာတယ်လို့လည်း ဆိုလို့မရပြန်ဘူးဖြစ်နေတယ်..။ Bakery မှာ ပေါင်မုန့်ရိုက်ရတာ စက်နဲ့ရိုက်ရတာအစဉ်ပြေပေမယ့် အိမ်သုံးမုန့်မွှေစက်နဲ့ဆို အဆင်မပြေနိုင်ဘူး ဒါကြောင့် စက်နဲ့မဟုတ်ဘဲ manual လက်နဲ့နယ်ရတဲ့အခါ အားသုံးရတယ် ပိုပင်ပန်းတယ်။ အဓိကက Puff တို့ Croissant တို့လိုမုန့်မျိုးက ပညာသိပ်ပါတယ်။ လက်ဝင်တယ် မုန့်နယ်တာလှိမ့်တာ တစ်ချက်မှားတာနဲ့ ဖိုထဲဖုတ်ပြီး ထွက်လာတဲ့ မုန့်အခြေအနေက ပြောင်းလဲသွားနိုင်တယ်...။ ပေါင်မုန့်သား စက်နဲ့ရိုက်တဲ့အခါ ရေအတိုး အလျှော့ မမှန်တတ်ရင်လည်း တစ်အိုးလုံးလွှင့်ပစ်ရသေးတယ်.. အရင်းနှီးကြီးတယ်..။ ကိတ်လိုင်းမှာ Cream တို့ဘာတို့နဲ့ Decorate မလုပ်ရတဲ့ ထောပတ်ကိတ်တို့ ငှက်ပျောသီးကိတ်တို့ လိုမုန့်မျိုးကတော့ လုပ်ရတာလွယ်တယ်...။ မုန့်ဖုတ်ပညာမှာ လွယ်တယ်ဆိုတဲ့ မုန့်တောင်မှ မီးအချိန်အဆလုပ်တတ်ရတယ် မုန့်ထဲပါဝင်တဲ့အချိုးအစားမှားလို့မရဘူး ဥပမာ Yeast လိုဟာမျိုးက ပိုတိကျရပါတယ်..။ သကြားတို့ ဂျုံတို့ဆိုတာက လိုတာပိုတာရသေးတယ်..။ မိန်းကလေးတော်တော်များများက Pastry လိုင်းကိုယူကြတယ် ကိတ်ကို ခရင်မ်နဲ့အလှဆင်တာ Fondant နဲ့အလှဆင်တာ စတဲ့အနုစိပ်ပညာကို ပိုအားသာလို့လည်းဖြစ်လိမ့်မယ်။
မုန့်တစ်ခုလုပ်ရမှာ အချိုမကြိုက်ဘူးဆိုပြီး သကြားကို တရားလွန် သူထည့်ရမယ့် အချိုးတစ်ဝက်လောက်ထိမလျှော့ချပါနဲ့..။ သကြားကလည်း မုန့်ရိုက်တဲ့နေရာမှာ သူ့နေရာနဲ့သူ သူ့စေးပျစ်မှုနဲ့သူရှိတာမို့လို့ပါ...။ မုန့်ကိုစက်နဲ့မွှေတာကို ကျွန်မတို့က ရိုက်တယ်လို့ခေါ်ပါတယ် အင်္ဂလိပ်လို beat ကနေ တိုက်ရိုက်ယူတာပါ..။ အခုက မုန့်ပုံတွေကို မုန့်လုပ်ရင်း သေချာမရိုက်ထားနိုင်လို့ ကဘောက်တိ ကဘောက်ချာတွေဖြစ်နေလိမ့်မယ် ဒါပေမယ့်ကြည့်လို့တော့ရတယ်မဟုတ်လား..။ အခုသင်တန်းမှာက တကယ့်အခြေခံကျကျမုန့်တွေကိုပဲသင်ပေးတာပါ..။ ကျန်တာတော့ ကိုယ်ဘာသာကို modified လုပ်ရမှာပေါ့..။ ဆွမ်းမွှေးကိတ်လို Japanese cotton cheese ကိတ်လို Chiffon ကိတ်တို့လို မုန့်မျိုးဆိုတာက ကျွန်မတို့ Asian ဖက်က ဂျပန်လူမျိုးတွေ တရုတ်တွေက တဆင့် modified ပြန်လုပ်ကြတဲ့မုန့်တွေ..။ အဲထဲမှာ Japanese cotton cheese cake ကိုသိပ်ကြိုက်တယ် မုန့်သားက နူးညံ့ပြီးအရသာလေးလေးပင်ပင်နဲ့ သိပ်စားကောင်းတယ် အဲဒီမုန့်ဖုတ်တတ်ဖို့ လေ့ကျင့်ရဦးမယ်။
ကျွန်မတို့ သင်တန်းက ကော်ဖီဆိုင်နဲ့တွဲလျက်မို့လို့ ကော်ဖီလာသောက်တဲ့ဧည့်သည်တွေကို ကိုယ်လုပ်တဲ့ မုန့်လေးတွေပေးမြည်းတယ်...။ တချို့ဧည့်သည်တွေ ကြိုက်ရင် ၀ယ်သွားတတ်သေးတယ်..။ အဲခါ ကိုယ့်မုန့်ကိုတခါတည်းရောင်းရတော့ ကျေနပ်စရာပီတိဖြစ်ပေါ့...။ ကျွန်မတို့သင်တန်းမှာ Bagel ပေါင်မုန့် အပတ်တိုင်း အော်ဒါလာမှာတဲ့ ဘိုတစ်ယောက်ရှိတယ်...။ ဘာနိုင်ငံသားလည်းတော့ မသိဘူး...။ Bagel ဆိုတာ မုန့်လက်ကောက်လိုပုံစံမျိုး ပေါင်မုန့်ကိုမှ အလယ်အမှာအပေါက်နဲ့ သူတို့ကတော့ ထောပတ်သုတ်ပြီး အသားတို့ ချီစ်တို့ ဆလပ်တို့နဲ့ ညှပ်စားကြတယ်..။ Bagel ပေါင်မုန့်ဆိုတာ ပိုလန်မှာနေတဲ့ ဂျူးလူမျိုးတဲ့စားတဲ့ ပေါင်မုန့်တစ်မျိုးပါ..။ ဆိုင်မှာ အများဆုံးလာတဲ့ ဧည့်သည်က ကိုးရီးယားတွေ ဆိုင်ရှင်က ကိုးရီးယားလေ..။ နောက် ဂျပန် တရုတ် ထိုင်းတို့ အနောက်ဥရောပသားတွေလည်း များတယ်..။
ကျွန်မက ငယ်ငယ်ကတည်းက အချက်အပြုတ်ဝါသနာပါခဲ့တာ...။ ကိုယ်ပိုင် ကဖေးဆိုင်သေးသေးလေး တစ်ဆိုင်ဖွင့်ဖို့လည်း အမြဲအိပ်မက်ခဲ့သူပါ...။ ခုတော့ အကောင်ထည် စဖော်နေပြီဆိုပါတော့..။ Home baking အသေးစားလေးပေါ့ တနိုင်မုန့်ဖုတ်လုပ်ငန်းလေး..။ မဟုတ်ရင်တောင် Online business အသေးစားလေး တစ်ခုလောက်တော့လုပ်ချင်ပါတယ်..။ တကယ်တမ်းက ကျွန်မက အချက်အပြုတ်ကို ပိုအားသန်တာ.. ကျွန်မဆိုင် ဖွင့်ဖြစ်တဲ့အခါ ခေါက်ဆွဲတော့ ပါအောင်ထည့်မယ် ကျွန်မက ခေါက်ဆွဲ ခရေဇီလေ..။ ခေါက်ဆွဲ အမယ်ပေါင်းတော်တော်များများကို ကြိုက်တာ တရုတ်ကြက်ဥခေါက်ဆွဲကအစ ပါစတာအဆုံးပေါ့..။ ကြက်ဥခေါက်ဆွဲလုပ်နည်းလည်း သင်တန်းမတက်ဖြစ်ရင်တောင် အွန်လိုင်းကနေလေ့လာဦးမယ်လို့စဉ်းစားထားတယ်...။
သင်တန်းမှာ မုန့်က 31မျိုးသင်ရမှာ ခုမှလမ်းတစ်ဝက်ရောက်ပါသေးတယ်...။ Pizza dough တို့ donut တို့ maccaron တို့လိုခက်တဲ့မုန့်မျိုးတွေကျန်သေးတယ်...။ နောက်မှ မုန့်တစ်မျိုးချင်းကို ပို့စ်ရေးပါဦးမယ်..။ မုန့်ပြီးသွားရင် ကော်ဖီသင်တန်းဆက်တက်မယ်...။ ဆရာက နှစ်မျိုးလုံးတပြိုင်တည်း တက်ခိုင်းတာ အလုပ်အားရက် နှစ်ရက်တည်းကို တစ်ရက်ကို ခြောက်နာရီလောက် အချိန်ပေးရမှာဆိုတော့ အချိန်မလောက်ဘူး ပိတ်ရက်နှစ်ရက်မှာ တခြားကိုယ်လုပ်စရာလေးတွေလည်းရှိသေးတာ မုန့်ရောကော်ဖီရော ခြောက်နာရီဆက်တိုက် သင်ရင် ဟုန်သွားမှာစိုးရသေးတယ်...။ ကျွန်မလုပ်တဲ့ မုန့်တွေကို ရုံးပြန်တက်တဲ့နေ့ကျရင် ရုံးက လုပ်ဖော်ကိုက်ဖက်တွေက အားပေးကြတာ ယူသွားတဲ့ မုန့်တောင် မလောက်ပါဘူး...။ ပြင်သစ်မုန့်တစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ Quiche ဆိုရင်ကြိုက်လိုက်ကြတာ..။ အဲဒီမုန့်အကြောင်း ပို့စ်တစ်ပုဒ်ရေးထားသေးတယ် နောက်မှတင်ပေးမယ်..။ ခုကတည်းက ကျွန်မကို Cookies နဲ့ Puff အော်ဒါမှာထားတာရှိတယ် သင်တန်းမပြီးသေးလို့ မလုပ်ပေးနိုင်သေးတာ...။
ဒါက ဂျုံကြမ်းပေါင်မုန့် သူတို့အခေါ်တော့ Whole wheat bread လှီးဖြတ်ပြီး ထောပတ်သုတ် မီးကင်စားကြတယ် ကြက်အူချောင်း ကြက်ဥကြော်တွေနဲ့စားကြတယ်...။ mushroom soup, tomato soup နဲ့လည်း စားကြတယ်...။ ကျွန်မတို့မြန်မာလူမျိုးတွေ ကတော့ ပေါင်မုန့်ဆို ဖြူ နုမှပျော့အိနေမှ ကြိုက်တတ်ကြတာမဟုတ်လား...။ ဒါတောင် ချားကိုးပေါင်မုန့်မျိုး မြန်မာတွေသိပ်မသိကြသေးလို့ မီးသွေးခဲလို မဲနက်နေတာ အဲပေါင်မုန့်က..။ ကျွန်မသင်ရတဲ့ထဲမှာ ဂျာမန်ပေါင်မုန့်လည်းပါတယ် သူကလည်း အညိုရင့်ရောင်ပေါင်မုန့်ပဲ...။ သူက Dark Rye Flour ဆိုတဲ့ အညိုရောင်ဂျုံသုံးရတာ... မရှိရင်တော့ ရိုးရိုးဂျုံထဲကို Cocoa powder ရောပြီးဖုတ်ကြတယ် ဒါက အညိုရောင်ကိုလိုချင်လို့သက်သက်ပါ..။ ဘယ်ဖက်က ဆရာလုပ်တဲ့ပေါင်မုန့် အောက်ခြေညီတော့ လှနေတယ် ညာဖက်က ကျွန်မလုပ်တာ ဘမ်းပေါ်တင်တော့ မုန့်အောက်ခြေမညီလို့ ထွက်လာတော့ ယိုင်နေတဲ့ပုံဖြစ်နေတာ။
cup cake လေးတွေ
Banana cake သို့မဟုတ် Banana bread လို့လည်းခေါ်တယ်
ဒါက Sandwich bread ဘေးသားများလှီးထုတ်ပြီး toast လုပ်စား ဒါမှမဟုတ် အသားညှပ်ပေါင်မုန့်လုပ်စား
အီကလဲယားမုန့်လေးတွေမလှဘူးလား အထဲက ကြက်ဥအကာခရမ်တွေထည့်ထားတယ်
တချို့ကို Custard cream ထည့်ထားတယ်..
Danish မုန့်က အပွခံဖို့နည်းနည်းလိုသွားလို့ မုန့်သားက ကျစ်ကျစ်ကြီးဖြစ်နေပါတယ်
Carrot Cake ထောပတ်နံ့လေးမွှေးပြီး သိပ်စားကောင်းတဲ့မုန့်
Brownie ဖုတ်ပြီးသားပုံမရိုက်လိုက်မိဘူး... သူထွက်လာတဲ့မျက်နှာပြင်ကထုံးစံအတိုင်း ကြေကွဲအက်နေတာရော
ဒါပေမယ့် စားကောင်းတယ် နည်းနည်းချိုတာကလွဲလို့
Posted by Cameron at 23:12
အဲလောက် အားစိုက်ရတာတွေ ပညာတွေနက်နက်နဲနဲပါမှန်း မတွေးမိ
ဖူးဗျာ ဒါကြောင့်လည်း မုန့်တွေမှာ အရသာရယ် စေတနာရယ် မုန့်လုပ်ခြင်း
အတတ်တွေရယ် ပေါင်းစပ်ပါဝင်တာမို့ ဘာမုန့်စားစား အရသာကောင်းလွန်း
တာနဲ့ မကောင်းတကောင်းပဲရှိ ဆိုးဆိုးရွားရွား မကြိုက်ဖြစ်ရတဲ့ မုန့်မျိုးမကြုံဖူး
သေးဖူး ဒေါ်မိုးငွေ့ပို့စ်ဖတ်ပြီးမှပဲ မုန့်လုပ်တာ မုန့်ဖုတ်တာမှာ အလေးနက်ထား
18 October 2016 at 00:00
18 October 2016 at 00:49
18 October 2016 at 20:33
Vegan Banana Cake လုပ်တတ်ချင်တယ်...
Banana Cake ကြိုက်လို့
22 October 2016 at 10:49
"What you think, you become. What you feel, you attract. What you imagine, you create....” Gautama Buddha
ယူက ကိုယ့်ပထမဆုံးဖွင့်တဲ့ gmail ထဲမှာ ဘယ်တုန်းကမှန်းမသိလိုက်ဘဲ ကိုယ့်သူငယ်ချင်း ဖြစ်နေနှင့်ပြီးသား သူတစ်ယောက်ပါ...။ တကယ်ေ...
တံလျှပ်ရောင်တွေ လက်လက်ထ နေတဲ့ လမ်းမကြီးနဲ့ နေ့ခင်းတစ်ခုမှာ အနက်ရောင်မိုးကောင်းကင် ရှေ့ကနေ ကျွန်မဖြတ်သွားခဲ့တယ်...။ မြင်ကွင်းဟာ ဖြတ်ခ...
ဒုတိယနေ့ကို စစ်ကိုင်း အင်းဝ သွားကြတယ် ...။ တနင်္ဂနွေပိတ်ရက်မို့ ညီမ၀မ်းကွဲက သူကိုယ်တိုင် ကားမောင်းလိုက်ပို့တာ ...။ သူက မနက်စာကို စစ...
Avocado, Cucumber, Kale Chicken Burger
Old-Fashioned Apple Cake : Oh, that brown sugar frosting!
Finally. Cendol. Asam Laksa. Char Koay Teow!
Stir Fried Chinese Yam with Beef